स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
२८ आश्विन २०७७, बुधबार २१:५५ नेपाली समाचार 0
काठमाडौँ ।विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अस्तव्यस्त छ । कोभिड संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएको छ । विश्वभरका वैज्ञानिकहरु यसको औषधि र भ्याक्सिनको खोजिमा छन् । तर अहिले सम्म कुनै तात्विक परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट बँच्नको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको >>>
२५ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:३१ नेपाली समाचार 0
काठमाडौं – खानेकुरामा विशेष ध्यान नदिदा धेरैलाई ब्लड प्रेसर लो को समस्या हुने गर्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसर लो हुने बिरामीहरुले खानेकुरामा धेरैनै खयाल गर्नुपर्छ । जसका लागि केही यस्ता खानेकुराहरु छन् जुन खाँदा ब्लड प्रेसर लो को समस्या हुँदैन । हामिले घर वरीपरी पाइने सागसब्जीहरु >>>
सुन्तलाको बोक्राका यस्ता छन् औषधीय गुण
१९ श्रावण २०७७, सोमबार २१:०८ नेपाली समाचार 0
काठमाडौ – सुन्तला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ ।यसको सेवन प्राय मानिसहरुले गरेको हुन्छन् । यो भिटामिन सि को भण्डार हो ।धेरै मानिसहरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको गुदि मात्र होइन बोक्रा पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ । सुन्तलाको बोक्राले >>>
स्वास्थ्य जीवनका लागि यी खानेकुरा काँचै खाँदा झन् फाइदा
३ श्रावण २०७७, शनिबार ०८:३१ नेपाली समाचार 0
काठमाडौं । गलत जीवनशैली र खानपानका कारण आजकल धेरै मानिसमा मोटोपनको समस्या हुन थालेको छ । तौल कम गर्नका लागि मानिसहरू डाइटिङ र जिम गरिबस्छन् । तर उनीहरूको तौल घटिरहेको हुँदैन । केही खानेकुराहरू नपकाइकन खाँदा बरू तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खासमा कैयौं खानेकुराहरूलाई >>>
२१ असार २०७७, आईतवार ०५:०२ नेपाली समाचार 0
काठमाडौँ । खादा तीतो भएपनि करेला स्वास्थ्यका लागि अति ला’भदायक छ । व्लड प्रेसर लो भएकाले धेरै खान नहुने करेला, स्वादमा जति तितो हुन्छ स्वास्थ्यमा उतिनै फा’इदाजनक छ । करेलाले खानामा रुचि बढाउँछ । करेला खादा छालाको सङ्क्रमण, चि’लाउने ख’टिरा, घा’उ आदिलाई ह’टाउँछ । करेलाले >>>
गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधिजस्तै , के के छन् त फाइदा
१८ असार २०७७, बिहीबार ०४:२० नेपाली समाचार 0
काठमाडौ । गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधिजस्तै छ । जो हामीलाई धेरै रोगहरुबाट मुक्त गर्छ । गाईको घिउ नियमित खाँदा शरीरको तौल स्थिर रहन्छ भने शरीरमा शक्ति पनि बढ्छ । यो बाहेक गाईको घिउ मानसिक स्वास्थ्य र छालाको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।गाईको >>>
६ असार २०७७, शनिबार ११:२७ नेपाली समाचार 0
काठमाडौ । आयुर्वेदले बेसारलाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा विज्ञानले पनि यसलाई भिटामिन र खनिजको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन्छ । बेसारमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी, भिटामिन ए, क्याल्सियम, फस्फोरस, फलामलगायत तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । बेसारलाई तरकारीमा मसालाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । दूधमा बेसार >>>
१ असार २०७७, सोमबार ०७:३३ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । सधैं बिहान किसमिसको पानी पिउनाले शरीरलाई भिटामिन लगायत फलाम पर्याप्त मात्रामा पान्छ । साथै यसमा चिनीको मात्रा पनि कम हुन्छ, यसमा प्राकृतिक एन्टीअक्सीडेन्टको मात्रा बढ्न जान्छ । जसले विरामी हुनबाट बचाउँछ। किसकिस र त्यसको पानीलाई कलेजो र किड्नीको बिरामीलाई निको पार्न प्रयोगमा आइरहेको छ। >>>
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:४९ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी – कुहिना , घाँटी , घुँडा र काखी कालो हुने कारणले गर्दा धेरै मानिसहरु यसलाई देखाउन लाज मान्ने गर्छन । विभिन्न कारणहरुले गर्दा शरीरका यी भागहरु कालो हुने गर्छ । मानिसहरु यस समस्याबाट छुट्कारा पाउनको लागि विभिन्न किसीमका प्रयासहरु गर्ने गर्छन् । यसलाई छिट्टै >>>
१ बैशाख २०७७, सोमबार २२:३९ नेसा संवाददाता 0
कोरोना भाइरसको त्रास विश्वभर बढेपछि यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर मानिसहरु अनेकौ उपायहरु गरिरहेका छन् ।कोहि मास्क, साबुन, पञ्जा, स्यानिटाइजर लगायतका वस्तु जोहो गर्न लागि परेका छन् भने कोहि यसबाट बच्न सकिने अरु उपायहरु खोजिरहेका छन् । कोरोनाबाट बच्न घरभित्रै रहने, साबुन पानीले हात धुने, >>>
२२ चैत्र २०७६, शनिबार २२:२४ नेसा संवाददाता 0
ऊर्जा दिने घिउफल: ‘एभोकाडो’ फल नेपालीमा ‘घिउफल’ का नामले समेत चिनिन्छ । यो फल झलक्क हेर्दा आँप वा नासपाती आकारको देखिन्छ । यो फल गोलो र लाम्चो आकारको हुन्छ । यसको बोक्रा, गुदी र त्यसभन्दा भित्र गोलो आकारको बियाँ हुन्छ । बोक्रा र बियाँको बीचमा >>>
कोरोन संक्रमणलाई रोक्नका लागि केही महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १३:४१ नेसा संवाददाता 0
अमेरिकास्थित जोन होपकिंस विश्वविद्यालयले कोरोन संक्रमणलाई रोक्नका लागि केही महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कोरोना भाइरसबारे महत्वपूर्ण जानकारी पनि दिइएको छ। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने के नगर्ने भन्नेबारे पनि सुझावहरु दिइएको छ। यो भाइरस कुनै जीवित जीव होइन। तर, एक प्रोटिन >>>
काेराेनाबारे १६ वटा शुभ खबर
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १२:१९ नेसा संवाददाता 0
१. चाइनाले उसको अन्तिम कोरोना अस्पताल पनि कोही उपचार गर्न नआएर बन्द गरिसक्यो । २. भारतमा डाक्टरहरु कोरोनाको उपचार गर्न सफल भइसकेका छन् । बिरामीहरुमा निम्न औषधि चलाइएको थियो, Opinavir, Retonovir, Oseltamivir along with Chlorphenamine. भारतीय डाक्टरहरुले संसारभरि सोही औषधि चलाउन सुझाब दिएका छन् । >>>
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १९:५७ नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । पछिल्लो समय धेरै मानिसमा पत्थरीको समस्या देखिने गरेको छ । हामीले खाने दैनिक खानामा ध्यान नपुर्याउँदा पत्थरी हुने धेरै सम्भावना हुने गर्छ । माछा–मासुजस्ता खाद्यपदार्थ बढी खानाले पिसाबमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्न गई पत्थरी हुने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी कफी, चिसो पदार्थ, >>>